FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Paska 2019 – Alahady 21 Aprily 2019
2 Tant 35 dia maneho ny fankalazana ny Paska tamin’ny andro i Josia Mpanjakan’i Joda. Zaza vao valo taona monja i Josia no tonga ho Mpanjakan’i Joda. Nataony ho zava-dehibe ny fametrahana ny fiainany, ny fitondrana ny fireneny tamin’Andriamanitra. Noho izany niroso tamin’ny fanitsiam-pivavahana izy ka niala tamin’ny lalan’ny fanompoan-tsampy nizoran’ireo mpitondra teo alohany mba ahazoan’ny fireneny, ny fiainany, ny vahoakany mitazaona ny famonjena efa notanterahin’Andriamanitra. Eto amin’ity 2 Tant 35 nitaona ny olona ho amin’ny fitandremana ny Paska izy . Ho marika fa tena miverina amin’ny fanompoana an’Andriamanitra marina tokoa. Voalaza fa fankalazana tena niavaka izao nataony izao, tsy mbola nisy toa izany ny fankalazana ny Paska teo amin’ny fiainan’ny Zanak’Israely.
Hita taratra eto ny fihetsika ataon’ny olona maniry hihazona ny famonjena
1. Manao ho zava-dehibe ny Tempoly sy ny fanompoana an’Andriamanitra
2. Mankatoa ny didin’Andriamanitra
3. Manamafy ny fanolorantenany
4. Miombona fiainana amin’ny mpiara-belona aminy
Rehefa niroso tamin’ny fanitsiam-pivavahana hanompo marina an’Andriamanitra i Josia Mpanjaka dia indro nasehony tamin’ny fametrahana amin’ny toerany ny Tempoly sy ny fanompoana an’Andriamanitra tanterahina ao amin’ny Tempoly izy.
Niditra tao amin’ny Temply, nametraka ireo mpisorona sy ny Levita ho amin’ny anjara fanompoan’izy ireo tsirairay avy tao amin’ny Tempoly, mametraka amin’ny toerana sahaza azy ny fiaran’ny fanekena
Manana ny anjara toerana manokana ny Tempoly teo amin’ny jiosy, io no toerana natao ihaonana amin’Andriamanitra, hitondra eo amin’Andriamanitra ny fiainana, ary toerana ho fanateram-panatitra. Mba ahalavorary ny fanompoana an’Andriamanitra no nanaovan’i Josia Mpanjaka izao fandaminana izao. Eny mba ahafahany, ahafahan’ny vahoakany mifandray amin’Andriamanitra ka hanao fanompoana marina. Tsaroany, inoany fa rehefa manao ho zava-dehibe ny fanompoana an’Andriamanitra ao amin’ny Tempoly ny olona dia azo antoka ny valim-bavaka avy amin’Andriamanitra, ny famonjen’Andriamanitra, araka ny Teny fampanantenana efa nataon’Andriamanitra tamin’ny fotoana nanokanana io Tempoly io ( 2 Tant 7, 16 … )
Ry havana malala, te-hihazona ny famonjena ve ianao ? hafatra ho anao amin’izao Paska izao ary ataovy ho zava-dehibe ny fandehanana aty amin’ny Tranon’Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny fanompoana tokony hataonao mifanaraka amin’izany. Any am-piangonana no ahita ny fiainam-pitahiana, lalam-pamonjena fa tsy any an-toeran-kafa. Jereo ny toe-javatra nahazo ny mpianatry ny Tompo. Nandeha tany amin’ny fasana ( Lio 24, 6 ), rehefa misy toe-javatra miseho manatona an’Andriamanitra.
Tsy nampiasa ny Tempoly fotsiny i Josia Mpanjaka fa indro mitaona sy mitarika ny olona ho amin’ny fitandremana ny Paska. Fitandremana ny Paska dia tanterahina araka ny didin’Andriamanitra rehefa nanafaka sy namonjy ny zanak’Israely teo ambany fanandevozan’ny Egyptiana Izy ( Eks 12 ), nohamafisina ao amin’ny Lev 23, 4….
Izany hoe ny fitandremana ny Paska izay nitarihin’i Josia Mpanjaka ny vahoakany dia fiverenena ho amin’ny fitandremana sy fankatoavana ny didin’Andriamanitra. Nanao fanitsiam-pivavahana i Josia Mpanjaka, namerina ny olona ho amin’ny fanompoana an’Andriamanitra izy, eny namerina ny olona ho amin’ny fankatoavana ny didin’Andriamanitra, mamerina ny olona hiaina araka ny Tenin’Andriamanitra. Amin’i Josia Mpanjaka lalana ahafahana mihazona ny famonjena ny fitandremana ny didin’Andriamanitra. Niroso ho amin’izany marina tokoa izy.
Ry havana malala, te-hihazona ny famonjena ve ianao ? raiso ka hankatoavy ny didin’Andriamanitra//ny Tenin’Andriamanitra izao nomena sy atolotra ho anao, notoriana sy nampianarina anao. Ny mpino mitandrina marina, miaina marina amin’ny Tenin’Andriamanitra no afaka mihazona ny famonjena. Jereo ny tantara, Jodasy tsy nitandrina ny didin’Andrimaanitra, tsy nandray ny fampianaran’i Jesoa Kristy dia lasa nivadika tamin’ilay Mpampianatra azy. Vokany fahaverezana no anjarany. Very ilay famonjena efa nifidianan’i Jesoa Kristy azy. Tsarovy fa mikendry hamingana mandrakariva ilay ratsy jereo ny Mat 4 . Antso ho anao araka izany afaka mihazona ny famonjena ianao raha manaiky hankatoa sy hitandrina ny Sitrapon’Andriamanitra.
Ireo mpianatra anie ka tsy nahatsiaro ny fampianarana nomena azy, ireo mpianatra tsy nahatsiaro ny Tenin’i Jesoa Kristy no nisalasala tamin’ny fitsanganana ( Lio 24, 6 ) ka saika novesaran’ny alahelo sy ny famoizam-po. Raha mitandrina ny didin’Andriamanitra isika dia manana finoana sy fanantenam-pamonjena mandrakariva. Mahaiza mihaino, mahaiza mivelona araka ny Tenin’Andriamanitra dia afaka mihazona ny famonjena ianao.
3. Manamafy ny fanolorantena ho an’Andriamanitra
Miavaka tanteraka ity fankalazana ny Paska tamin’ny andron’i Josia Mpanjaka ity. Nasehony tamin’ny fanolorantena marina ny firosoany ho amin’ny fanompoana an’Andriamanitra.
Tsy hoe niteny sy namporisika fotsiny izy fa nasehony tamin’ny asa, marika hita maso ny fanolorantenany hanompo, tena hanompo an’Andriamanitra.
Jereo anie ny hetsika nataony, hetsika naharesy lahatra ny hafa ihany koa : 2 Tant 35, 7…. Raha natao ny kajy dia ondry miisa 37 600 sy omby miisa 3 800 no voavory entina mankalaza ny Paska.
Fanomezana an-tsitrapo no nataon’ireo nanome, mariky ny fahafoizana ny fananana, nefa koa fanolorantena ho an’Andriamanitra. Tsaroana tamin’izao fankalazana ny Paska izao ny famonjena efa notanterahin’Andriamanitra noho izany fanolorantena tena miavaka no nataon’izy ireo.
Ry havana malala, te-hihazona ny famonjena ve ianao ? . Tsarovy efa vitan’i Jesoa Kristy teo amin’ny Hazo fijalina any famonjena, tsarovantsika ankehitriny izany. Miantso anao araka izany. Tsy atao amin’ny teny ihany ny fahavononana hanompo an’Andriamanitra fa atao mifanaraka ny teny sy ny asa. Josia mpanjaka vao 8 taona monja izao tonga mpanjakan’i Joda izao kanefa mpanjaka tena marina tamin’ny fanolorantenany. Tanteraka teo amin’i Josia Mpanjaka ilay voalaza ao amin’ny Mat 7, 17 manao hoe : «ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara ». Tsy nanam-panahiana ny amin’ny ho aviny izy, nahafoy fanana izy, nafoiny ho an’Andriamanitra fa ho mariky fanolorantenany. Paska taona 2019 miantso anao mba hanolontena marina ho an’ilay Jesoa Kristy Mpamonjy anao. Azo antoka ny famonjena notanterahin’i Jesoa Kristy ho anao manana fahafoizantena ho Azy.
4. Miombom-piainana amin’ny mpiara-belona ( namana )
Ny fankalazana ny Paska teo amin’ny jiosy dia mariky ny fiombonam-piainana. Fanehoana fifankatiavana. Izay mahatsiaro fa olona novonjen’Andriamanitra dia mahay mitia, mihevitra ary mitsinjo ny mpiara-monina, na ny namany. Ndeha anie vakiantsika ny Eks 12 araka ny toro-marika ho an’ny Z I e.
Inona no zava-nitranga eto amin’ity fankalazana ny Paska tamin’ny andron’i Josia ity ?
And.7 nomen’i Josia…
And.8 ny mpanapaka nomena an-tsitrapo ho an’ny olona…
Hilkia sy Zakaria…. Nanome…
Ny fanomezana izay natao mariky ny fanolorantena, dia fanehoana ihany koa fiombonana amin’ny namana. Toro-marika ao amin’ny Eks 12 . Miseho eto izany. Mifampihevitra, mifampitsinjo. Mba tsy ho olona vitsy ihany no mifaly amin’ny fankalazana ny Paska fa ny olona rehefa, ny mponina rehetra.
Ry havana malala, te-hihazona ny famonjena ve ianao ? Tsarovy fa tsy irery ianao eto amin’ity tany ity. Ary indrindra i Jesoa Kristy dia efa nampianatra ny amin’ny fifankatiavana eo amin’ny mpanaradia Azy. Mankalaza ny Paska 2019 ianao ankehitriny, hevero indray izany fifankatiavana, fiombonana izany. Ho an’ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo tsarovy fa mampiombona ny mpino ho tena iray ny fanoloran’i Jesoa Kristy ny tenany. Ary tsarovy fa io hazo fijaliana io dia maneho fa ny fahafatesan’i Jesoa Kristy dia mikendry fampiombonana, fampihavanana ny olona rehetra na iza izy na iza. Mazava tsara ny 1 Kor 5, 8 . Amena